Ushonile owasemame wakwaNongoma oshiswe yisoka ngophethiloli | News24
Ngokusho kwawo, owesimame wahlaselwa wusiye wesingane zakhe wambhunyela ngophethiloli wamshisa.
Kuthiwa lo mlisa wenze lokhu ngoba lowesimame ukumenele ngoMgqibelo owesifazane waseNkunzani, KwaNongoma, obhunyelwe uyise wezingane ngophethroli wamokhela ngomlilo.
Ngokubika kwephephandaba iSolezwe, uNompumelelo Mthembu, 28, ushone ngoMgqibelo kulandela ukubhunyelwa ngophethilolu nguyise wezingane zakhe, ngoba enqaba ukuba bebuyelane.
OLUNYE UDABA:Uyedwa oshonile kwabanqunywe imiqala eVerulam
Umufi onezingane ezintathu nomsolwa, kuthiwa ubesebuyele kubo njengoba ngoMashi wamshaya waze wamdlokodla isitho sangasese ngesagila umsolwa kulandela ingxabano ethinta imali yesibonelelo sikahulumeni yezingane.
Wahlala isikhathi esibhedlela uMthembu ekhishwa isagila njengoba umndeni uthe kwaze kwaphoqeleka ukuba akhishwe nesibeletho.